आर्थिक – Samridda
Home > आर्थिक
मन्त्रीका लागि भैंसेपाटीमा यसरी बन्दैछ आवास
- April 18, 2019 0350
५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नयाँ मन्त्रीनिवास ललितपुरको सैबुँ भैंसेपाटीमा बनाउन ‘मास्टर प्लान’ तयार पारेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भैंसेपाटीमा सबै संघीय मन्त्रीका लागि निवास तथा प्रदेशको सम्पर्क कार्यालयसमेत बनाउने मास्टर प्लान तयार पारेको हो । यस्तो छ मन्त्रीनिवासको मास्टर प्लान ? सहरी विकास मन्त्रात्रलयले मन्त्री निवासका लागि ८७ रोपनी १३ आना
सातै प्रदेशले पाए नयाँ बजेटको सिलिङ (सूचीसहित)
- April 16, 2019 0300
३ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै सातवटै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुटेका छन् । तर, बजेट निर्माण गर्न आवश्यक सफ्टवेयर नहुँदा समस्या परेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयले हालै सातैवटा प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाट र वित्तीयसमानीकरण
७ दिनभित्र ३९ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेललाई सरकारको पत्र
- April 16, 2019 April 16, 2019 0203
३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई पुँजीगत लाभकर कर तिर्न बोलाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर तिर्नका लागि समयसीमा दिएरै एनसेललाई सूचना जारी गरेको छ । टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री
- April 15, 2019 0402
२ वैशाख, काठमाडौं । यस पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको छ । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै प्राधिकरणले खुद नाफा कमाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४\_७५ मा मात्रै २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत भदौमा आर्थिक वर्ष २०७४\_७५ मा १
- April 15, 2019 0254
२९ चैत,काठमाडाैँ । विवकेशील साझा पार्टीले जग्गा दलाल तथा भूमाफिया विरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेकाे छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवासलगायत सरकारी हाताभित्रकाे जग्गा भूमाफियाले बिक्री गरेर निजीकरण गरेकाे विराेधमा साे पार्टीले आज प्रदर्शन गरेकाे हाे । पार्टी प्रवक्ता डा.सूर्यराज आचार्यलगायत सयौं सहभागी रहेकाे प्रदर्शनकारीले ‘बालुवाटार बेच्नेले सिंहदरबार बेच्लान् होसियार !’,
- April 14, 2019 0474
१ वैशाख, काठमाडौं । सोलुखुम्बुको लुक्ला एयरपोर्टमा हवाई जहाज र हेलिकोप्टर ठोक्किँदा मृत्यु हुनेहरुको संख्या ३ पुगेको छ । अर्का असई रुद्रबहादुर श्रेष्ठको पनि मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ३ पुगेको हो । श्रेष्ठको काठमाडौं ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि समिट एयरका कोपाइलट सुदीप ढुंगाना र पर्यटक प्रहरी
चितवनमा एक दम्पत्तिले गरे आश्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति दान
- April 13, 2019 April 13, 2019 0347
चितवन, ३० चैत । पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा एक जना व्यक्तिले करिब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति महेश सन्याश आश्रमलाई दान गरेका छन् । देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा बस्दै आएका चित्रराज पाण्डे तथा जीवनकुमारी पाण्डेले आफ्नो एक रोपनी जग्गा सहित त्यहाँ निर्माण गरिएको सन्तोषेश्वर शिव मन्दिर र दुई तले पक्की
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट: काम नगरे पनि भुक्तानी
- April 13, 2019 0217
काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारी प्रगति हुन नसकेको र एक अन्तर्राष्ट्रिय खरीदकर्तासँग गरिएको सम्झौताले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ । सरकारले देशभरका पच्चीस लाख सवारी साधनमा त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान कार्य २०७४ भदौ ५ देखि शुरु भएको हो । त्यसका लागि सरकारले काम
प्रधानन्यायधीशको साहसिक फैशला ,एनसेलबाट उठ्ने भयो ६० अर्ब ७१ करोड कर
- February 6, 2019 February 6, 2019 0813
काठमाडौं, माघ २३ लामो समय अनिर्णयको बन्दी भएको "एनसेल कर प्रकरण् " अन्तत एनसेलबाटै कर उठाउन सर्वोच्चले वृहद पूर्ण इजलासमार्फत दिएको परमादेश बाट किनारा लागेको छ | बुधवार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी
फेसबुकमा अब भुपु मायालुको तस्बिर देख्नु नपर्ने : नयाँ फिचर
March 20, 2018 0441
विवाह पश्चात युवतीहरूको शरीर कसरी परिवर्तन हुन्छ ? यस्ता छन् १० परिवर्तनहरु
November 11, 2017 0301
February 24, 2020 0422